The Voice Of Somaliland: Maraykanka oo hakiyay socdaal Axmed-Siillaanyo kaga soo laaban lahaa Nairobi
Maraykanka oo hakiyay socdaal Axmed-Siillaanyo kaga soo laaban lahaa Nairobi
(Waridaad)-Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Xisbiga KULMIYE Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar ayaa sheegay in la hakiyay sodaal uu Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siillaanyo) berri kaga soo laaban lahaa dalka Kenya oo uu mudo caafimaad u joogay.
Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar oo xalay khadka talefoonka kula soo xidhiidhay Wargeyska Ogaal isaga oo jooga magaalada London, ka dib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay dalka Maraykanka, waxa uu sheegay in socdaalkiisa Washington uu la xidhidhay martiqaad uu ka helay Baarlamaanka dalkaas. Xoghayuhu wuxuu sheegay in mudadii uu joogay Washington uu la kulmay masuuliyiin sar-sare oo ka tirsan Waaxda Arrimaha Dibadda iyo Sen. Donald Payne oo ah Guddooiyaha Guddi-hoosaadka baarlamaanka dalkaas u qaabilsan arrimaha Afrika.
Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar waxa uu sheegay in masuuliyiintii uu la kulmay uu xog-waran ka siiyay xaaladda Somaliland, isla markaana uu dorraad kulan la yeeshay Xoghayaha Bariga Afrika u qaabilsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka. “Masuuliyiintaa aanu kulanka wada yeelanay ee arrimaha dibadu waxay muujiyeen inay aad uga xun yihiin go’aanka lagu laalay natiijada diiwaangelinta iyo sida xukuumada Rayaale uga dhego-adaygayso doorashada madaxtooyada,” ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar. Wuxuuna sheegay in talaabooyinkaasi yihiin kuwo aad u sii kala fogaynaya xidhiidhka Somaliland iyo beesha caalamka.
“Donlad Payne wuxuu ii sheegay inuu raacayo oo uu ka mid yahay wefti ay hogaaminayso Wasiirka Arrimaha Dibadda Maraykanka Mrs Hillary Clinton oo socdaal ku tegaya Bariga Afrika. Markaa waxaan ka codsaday inuu la kulmo Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Axmed Siillaanyo oo hada ku sugan Nairobi, sidaa darteed waxa Axmed Siilaanyo lagu wargeliyay inuu hakiyo socdaalkii uu kaga tegi lahaa Nairobi, wuxuuna maalmaha soo socda halkaa kula kulmayaa Sen. Donald Payne.” Ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdillaahi. Waxaanu intaa ku daray inay haatan isku deyayaan sidii ay u suuragelin lahaayeen oo jadwal-hawleedkeeda loogu dari lahaa in Axmed Siillaanyo kulan la yeesho Mrs Hillary Clinton.